मार्सेलोका कारण रियलमा आउन सकेनन् नेमार ! – Khel Dainik
मार्सेलोका कारण रियलमा आउन सकेनन् नेमार !
एजेन्सी । रियल मेड्रिडका पूर्व म्यानेजर जिनेदिन जिदानले क्लबबाट राजिनामा दिनुअघि ब्राजिलियन फरवार्ड नेमारलाई बर्नबेयु ल्याउने आइडियालाई स्वीकृत गरेका थिएनन् । उनलाई लाग्थ्यो नेमार र अर्का ब्राजिलियन डिफेन्डर मार्सेलो एकसाथ खेल्न सक्दैनन् ।
ब्राजिलियन पत्रकार आन्द्रे रिजेकले ब्राजीलको एक स्पोर्ट टिभीसँग यो कुराको खुलासा गर्दै भनेका छन्, “मलाई यो कुरा जिदानको साथीबाट थाहा भयो । क्लब छोड्नु अघि जिदान र उनका यी साथीले सँगै डिनर गरेका थिए । यहि भेटघाटका क्रममा जिदानले नेमारको बर्नबेयु आउने सम्भावनाबारे आफ्नो विचार राखेका थिए ।
जिदानले आफ्नो साथीलाई भनेका थिए कि उनलाई नेमार बर्नबेयु आउने कुरा मन परेको छैन । जिदानका अनुसार नेमार र रियलका लेफ्ट ब्याक मार्सेलो एकसाथ खेल्न नसक्ने उनको बुझाई थियो । जिदानलाई लाग्थ्यो यी दुवै खेलाडीले मैदानको एकै भागमा खेल्थे र जिदानले नेमारको अनुबन्धमाथि असहमति जनाएका थिए ।”
ICYMI | Marcelo, the reason Zidane didn’t want Neymarhttps://t.co/ohGhOy1H07
स्मरणीय छ कि रियल मेड्रिडलाई लगातार तेस्रोपटक च्याम्पियन्स लिग जिताएको पाँच दिनपछि जिदानले बर्नबेयु छोड्ने घोषणा गरेका थिए । उनको यो निर्णयसँगै धेरै आश्चर्यमा परेका थिए । कतिपय सञ्चारमाध्यमहरु उनको यो राजिनामा पछाडीको कारण खोज्न प्रयासरत समेत थिए ।
कुनै कुराहरु बाहिर समेत आएको थियो । त्यसमध्ये ला लिगामा क्लबको प्रदर्शन र कोपा डेल रेमा लेगानेससँगको हार पनि एक कारण मानिएको थियो । कसै–कसैले रियलको ट्रान्सफर प्लान जिदानको सहमति बिना नै बनाइएको बताईन्छ । जसमा नेमारको स्थानान्तरण पनि सामेल थियो ।
आफ्ना स्टार खेलाडी क्रिष्टियानो रोनाल्डोलाई युभेन्ट्समा बेचेपछि रियलले नेमारलाई आफ्नो मुख्य टार्गेट बनाएको छ । यद्यपि पछिल्लो साता रियलले एक आधिकारिक वक्तव्य निकाल्दै क्लबले नेमारलाई अनुबन्धको प्रयास गरेको हल्लाहरुलाई अस्वीकार गरेको थियो ।
← रियल मेड्रिडका लागि डी स्टेफानो भन्दा ठूला लिजेण्ड हुन् रोनाल्डो : मोरिन्टेस सिरि ए को परिचय परिवर्तन गरिदिनेछ रोनाल्डोको युभेन्ट्स मुभ : मौरिन्हो →